fitokisana Archives - Pejy 2 amin'ny 3 - Countdown to the Kingdom
Tag Archives: fahatokiana
Finoana fa tsy tahotra
Mikasika ireo mpitsoa-ponenana, sakafo, Fampitandremana, ary inona no hatao amin'izany.
Gisella - Ilay hany làlana
Aza matahotra ny fitiavan'Andriamanitra.
Pedro - Aza avela ny haizin'ny devoly
Marary ny zanak'olombelona ary mila sitrana.
Gisella - Tapitra ny fotoana!
Tsy ho ela dia ho hitanao ny fiovana eo amin'izao tontolo izao.
St. Faustina - Momba ny famoizam-po
Matokia ny famindram-poko.
Andinin-tsoratra masina: mandritra ny fotoana mety hahitana azy
Tonga ny fotoana.
Manakaiky an'i Jesosy
Inona no tanjona farany an'ity tranonkala ity, ny faminaniana, ny fifanakalozan-kevitra momba ny "andro farany", sns?
Pedro Regis - Aza matahotra ny vesatry ny fitsapana
Ny fitaovam-piarovanao fiarovana dia vavaka amin'ny fo.
Luz de Maria - Fandrosoana kominisma
«Previous 1 2 3 manaraka »